August 20, 2019 - Real Gaming Myanmar
ရေနွေးထဲ ဂျင်းထည့်ပြီး အိပ်ခါနီးတိုင်းသောက်ပေးရင် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများ
ရေနွေးထဲ ဂျင်းထည့်ပြီး အိပ်ခါနီးတိုင်းသောက်ပေးရင် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများ ဂျင်းမှာ သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ပိုတက်ဆီမယ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကော့ပါးသတ္တုတွေပါဝင်တာကြောင့် နေ့စဉ်မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ဓာတ်စာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ရေနွေးထဲ ဂျင်းထည့်ပြီးသောက်ပေးလိုက်ရင် ရရှိလာမယ့် …
တားနေတဲ့ကြားက အရက် နဲ့ ဒူးရင်းသီးကို အတူစားမိလို့ အဖြစ်ဆိုးသွားခဲ့ရသူ
တားနေတဲ့ကြားက အရက် နဲ့ ဒူးရင်းသီးကို အတူစားမိလို့ အဖြစ်ဆိုးသွားခဲ့ရသူ အရက် နဲ့ ဒူးရင်းသီး မတည့်ဘူးဆိုတာကိုတော့ လူတိုင်း သတိထားရပါတယ်။ အသက် (၄၈) နှစ်အရွယ် ထိုင်းနိုင်ငံသား …
တစ်ပတ်စာနာမက္ခရအထူးဟောစာတမ်း . . . 19.8.2019 မှ 25.8.2019 အထိ
တစ်ပတ်စာနာမက္ခရအထူးဟောစာတမ်း . . . 19.8.2019 မှ 25.8.2019 အထိ (အ၊အာ၊ဣ၊အိ၊အီ၊ဥ၊ဉူ၊ဧ၊သြ) စသည့် ”အ” အသံထွက်နှင့်စတင်မှည့်ခေါ်ထားသော အမည်ပိုင်ရှင်များ လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုတွေရမည်။အလုပ်နဲ့ပက်သက် သောခရီးတွေသွားရမည်။ အကြီး …
မိဘတွေကို အသက်ရှည်စေချင်ရင် သားသမီးတိုင်း မဖြစ်မနေ လုပ်ပေးရမယ့်အရာ
မိဘတွေကို အသက်ရှည်စေချင်ရင် သားသမီးတိုင်း မဖြစ်မနေ လုပ်ပေးရမယ့်အရာ ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကို အသက်ရှည်ရှည် နေစေချင်တာ လူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲက ဆန္ဒဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိဘတွေဟာ သားတွေသမီးတွေအပေါ်မှာ ကျေးဇူးအရှိဆုံး လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီး၊ သူတို့ …
ထားရစ်သွားတဲ့ ချစ်သူနောက်ကို အမီပြေးလိုက်ရင်း ၊ အမောဆို့ သေဆုံးခဲ့ရသူ
ထားရစ်သွားတဲ့ ချစ်သူနောက်ကို အမီပြေးလိုက်ရင်း ၊ အမောဆို့ သေဆုံးခဲ့ရသူ မလေးရှားနိုင်ငံ ၊ ဆာရာဝက်ပြည်နယ်မှာ ကောင်မလေးနဲ့ ကောင်လေးတို့ အချင်းများ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ အမျိုးသားကတော့ အသက်( …
ထိပ်ပြောင် သူများအတွက် အမြန် ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေနိုင်တဲ့ သဘာဝ အစားအစာ
ထိပ်ပြောင် သူများအတွက် အမြန် ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေနိုင်တဲ့ သဘာဝ အစားအစာ ထိပ်ပြောင်သူတွေ၊ ဦးခေါင်းဆံပင် ကျဲပါးသူတွေ၊ အလယ်ကွက်ပြောင်သူတွေအတွက် ဓာတုဆေးဝါးတွေ အသုံးပြုမှုကို ရပ်ဆိုင်းထားသင့်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ လူတွေရဲ့ သွေးသားလည်ပတ်မှုဟာ …
မ ရှိ တဲ့ ကြား က နေ ရေ ဘေး သင့် ပြည် သူ တွေ အ တွက် အ ဝတ် အ ထည် အ သစ် စက် စက် တွေ လှူ ဒါန်း လိုက် တဲ့ ဦး မန်း ဝင်း …
မ ရှိ တဲ့ ကြား က နေ ရေ ဘေး သင့် ပြည် သူ တွေ အ တွက် အ ဝတ် …
ကားကြုံလိုက်လာသော ကျောင်းသူ (၃)ဦးကို မဖွယ်မရာ လုပ်ပြသည့် ယာဉ်မောင်းအား ဖမ်းဆီး
ကားကြုံလိုက်လာသော ကျောင်းသူ (၃)ဦးကို မဖွယ်မရာ လုပ်ပြသည့် ယာဉ်မောင်းအား ဖမ်းဆီး ကားကြုံလိုက်လာသော ကျောင်းသား/သူ (၃)ဦးကို မဖွယ်မရာပြုလုပ်ပြသည့် ယာဉ်မောင်းအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ ကျောင်းတက်ရန် ကျွဲပွဲမြို့မှ လမ်းကြုံလိုက်လာ …
ခေတ် တွေ ဘယ် လို ပြောင်း ပြောင်း ငယ် ရွယ် နုဖ တ် တဲ့ မျက် နှာ ​လေး နဲ့ အ မြဲ ချစ် ဖို့ ကောင်း နေ တဲ့ ထက် ထက် မိုး ဦး …
ခေတ် တွေ ဘယ် လို ပြောင်း ပြောင်း ငယ် ရွယ် နုဖ တ် တဲ့ မျက် နှာ ​လေး နဲ့ အ …
မီ တာ ခ တွေ ဈေး တက် လို့ ဖာ ခံ ထွက် နေ ရ ပီ ဆို တဲ့ ကောင် မ လေး
မီ တာ ခ တွေ ဈေး တက် လို့ ဖာ ခံ ထွက် နေ ရ ပီ ဆို တဲ့ ကောင် …